निर्जीवन बीमा के हो? दाबी कसरी गर्ने ? – Banking Khabar
निर्जीवन बीमा के हो? दाबी कसरी गर्ने ?
बैंकिङ खबर । निर्जिवन बीमा पनि एक निश्चित अवधिको लागि गरिने सम्झौता पत्र हो । निर्जीवन बीमाले सम्पत्तिको हानी नोक्सानी र दायित्वको जोखिमबाट मुक्त हुनका लागि गरिने करार हो । निर्जीवन शव्दले सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धि विषयलाई बोध गराएता पनि यसले मानव जीवनको केहि अंशलाई समेटेको हुन्छ ।
सामन्यतया चल अचल सम्पत्ति जस्तै घर, उद्योग कलकारखाना, सवारी साधन आदिको गरिने बीमा निर्जीवन बीमा हो । निर्जीवन बीमा अन्तरगत दुर्घना, औषधीपचार खर्च, तेस्रो पक्ष दायित्व, उत्पादन दायित्व, विदेश यात्रामा पर्ने जोखिम लगायतको बीमा हुन्छ ।
दुर्घटना, आगलागी, चोरी लगायत विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिको क्षतिपुर्ति प्राप्त गर्न तथा जोखिमबाट हुन सक्ने सम्भाव्य नोक्सानीको क्षतिपूर्ति वा राहत पाउन निर्जीवन बीमा गर्ने गरिन्छ ।
यदि सम्पत्तिको बीमा गरिएको छ भने कुनै कारणवश सम्पत्ति नाश भएमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्छ । कम्पनीहरुले शतप्रतिशत नभए पनि अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्छन् । सो रकमले मानिसले फेरि सम्पत्ति जोड्न सक्छ । मानिस फेरि पहिलेकै अवस्थामा आउन सक्छ । अन्यथा यस्ता दुर्घटनाले करोडपति पनि फुटपाथमा आउन सक्छन्
कसरी लिने दाबी भुक्तानी
दाबीको अनुमानित लागत तथा क्षतिको कारण